(ဒေါက် တာ နေသွေး)ပြောပြတဲ့ ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း ကို ဖြတ်သန်းနေ ရပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း – Shwe Ba
ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့သူက ဆေးရုံကုတင်ပေါ်က လူတယောက်လဲဖြစ် ကောင်းဖြစ်မယ်။ ရန်ကုန် သို့ ရခိုင် သို့ တချို့မြို့တွေပေါ်က သတ် မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ နေထိုင်ရင်း ဖတ်လိုက်ရတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ရွာအပြင်က တဲကလေးမှာ ခြင်ကိုက်ခံရင်း တယောက်ထဲ ဒု က္ခခံလို့ တရွာလုံးနဲ့ တယောက် မလဲရစေဖို့ စွန့်စားလိုက်တဲ့ လူငယ်လေး လဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ နေရထိုင် ရတာ အဆင်မပြေပေမယ့် အများအကျိုးအတွက် အတ္တနဲ့ ပရကို ဖလှယ်လိုက်သူလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ လူနာတွေ များလာပီဆိုပီး စိတ်ဓာတ် ကျနေသူလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
အစားအသောက်အလျှံပယ်နဲ့ ဘီယာလေး ငုံရင်း နောက်တလလောက်တော့ အိမ်ထဲ မှာပဲ အောင်းနေမှဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ သူကြွယ်ကြီးလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အခန်းတခန်းမှာ လူဆယ်ချီ စုနေရပီး အိမ်မပြန်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း ငြီးတွားရင်း လက်ကျန်ငွေလေးနဲ့ အသက် ဆက်ဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အလုပ်သမလေးတွေလဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ်။ ကျူးကျော် တဲလေးမှာ စုပြုံတိုးနေရတဲ့ မိသားစုတွေကို မကြောက် ကြဖို့နဲ့ အားမငယ်ဖို့ အားပေးနေတဲ့ ရောဂါတွေကြား ဝမ်းတထွာကို ရှာဖွေရတဲ့ တနေ့လုပ် တနေ့စား အလုပ်သမားလေးလဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ်။အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေမှာ တယောက်ကို တယောက် ဖေးမကြ မယ်။ အတူ တူ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။
အချိန်တိုင်းမှာ ခေါင်းတွေမေ့ထားမယ်။ အားတင်းထားကြမယ်။ လူမျိုး ဘာသာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး ကုသပေးကြမယ်။ ခက်ခဲတဲ့နေ့တွေ အမှောင်ဆုံးနာရီတွေမှာ အတူတကွ လျှောက်လှမ်းကြမယ်။နောက်ဆုံးတနေ့… ဒီရောဂါကြီး ပြီးသွားပီဆိုတဲ့တနေ့မှာ…. အားလုံးနဲ့အတူ နေ့သစ် တခုရဲ့ နေရောင်ကို မိုးကောင်းကင် တခုထဲအောက်မှာ အတူကြည့်ကြမယ်။ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှုတွေကို သတိရရင်းနဲ့ပေါ့……မြန်မာပြည် ကတော့ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းကို ဖြတ်သန်းနေ ရပီဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားလာတဲ့ လူနာအရေအတွက်၊ ကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန် ထမ်းတွေရဲ့ အနေအထား၊ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နေရာထိုင်ခင်း အစရှိတာတွေကိုလဲ ထိန်းပီး လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။
ရှေ့တန်းက လူတွေလဲ အလွန်ပင်ပန်းနေကြပါပီ။ ပြည်သူတွေ ထဲမှာလဲ ကြောက်လန့်နေသူတွေ ရှိတယ်။ ဂရုမစိုက်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ ဂရုစိုက်ချင်သော်လည်း ဝမ်းရေးအရ အံကြိတ်လုပ်နေရသူတွေလဲရှိတယ်။ အများစု ရင်ထဲမှာတော့ ပူပင်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ပါပဲ။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး အကုန်လုံးကို စိတ်ပူနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြတ်သန်းနေ ရဆဲပါပဲ။တမနက် မိုးလင်းလာတယ်။ လူနာ ဘယ်နှယောက်လဲ ကြည့်ကြတယ်။ လန့်ကြတယ်။ စိတ်ပူကြမယ်။ နောက် ညရောက်လာတယ်။ လူနာစာရင်း ကြည့်ကြတယ်။ လန့်ကြတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျကုန်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့စွဲတွေ တရက်ပီး တရက် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတာ အခုဆို ၁လ နီးပါးရှိတော့မယ်။
၁ လ ဆိုတဲ့ အချိန်က မသေးပါဘူး။ ပိုးကူးစက်မှုကလဲ နောက် ၂ ပတ်လောက်ထိ လျှော့ကျဖို့ မရှိသေးဘူး။ မြင့်နေဦးမှာပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ အားတင်းထားကြဖို့ ပြောပေမယ့် လူအများစုက စိတ်ဓာတ်ကျနေကြပါပီ။ မကျကြပါနဲ့ဦး။ ဒီတိုက်ပွဲကို အနိုင်တိုက်ကြ ရအောင်ပါ။ တရက် တရက် နေထွက်လာတိုင်း တာဝန်ကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ရှေ့တန်းက ကုသနေကြတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလဲ ရုံးတက်နေ ကြတုန်းပဲ။ အပြင်လုပ်ငန်းတွေလဲ ဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲ။ ပြည်သူတွေလဲ ဝမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရဆဲပါ။ တရက်ပီး တရက် ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေကြရင်း ကျော်ဖြတ်နေကြတာပါ။ ပိုထူးလာတာက ရောဂါကာကွယ်ဖို့ သတိထားနေထိုင်ရတာလေး တခုပါပဲ။
စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ နေ့သစ်တိုင်းကို လူသားတိုင်း အတူတူ ကျော်ဖြတ်ကြရတာပါ။ ကျနော်တို့လဲ ရင်ဆိုင်မယ်။ ခင်ဗျားတို့လဲ ရင်ဆိုင်ကြ ရတာပါပဲ။ အားလုံးဟာ အတူတကွပါပဲ။ ကုသရသူက ကုမယ်။ သံသယရှိသူက သတ်မှတ်နေရာမှာ နေရမယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူက ဆေးရုံမှာ နေရမယ်။ ကျန်သူတွေက ကိုယ့်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေကြမယ်။ ပြန်ကောင်းလာသူက တာဝန်တွေ ပြန်ထမ်းဆောင်မယ်။ နေ မကောင်းဖြစ်လာသူက ဆေးရုံကို ပြန်လာမယ်။ ဒီလိုပဲ သံသရာလည်ရင်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားကြရမှာပါ။ ဘာမှမလုပ်ရသေးခင် ဘာမှကူး စက်မှု မခံရသေးခင်ထဲက ကြိုတွေးပီး စိတ်ဓာတ် ကျနေမယ်ဆို လူဖြစ်ရှုံးပါတယ်။
အရာရာကို ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်၊ အရှုံးမပေးတဲ့ ဇွဲနဲ့ ကျော်ဖြတ်ပါ။ ရောဂါရှိနေသူတွေကလဲ ငါပြန်ကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ မရှိသေး သူကလဲ ငါ မကူးစက်အောင် ကြိုးစားနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရဲရဲတောက်ဖြတ်သန်းကြပါ။ လှေခွက် ချည်းကျန် အလံမလှဲပဲ တိုက်ပွဲ ဝင်ကြပါ။ အားလုံးဟာ ဒုတိယလှိုင်းကို အတူတကွ ဖြတ်သန်းနေကြတာပါ။ တယောက်ထဲ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနေရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ မနက်ဖြန်များစွာ ရှိပါသေးတယ်။ အားတင်းထားပါ။
ဒီစာကို ဖတျနတေဲ့သူက ဆေးရုံကုတငျပျေါက လူတယောကျလဲဖွဈ ကောငျးဖွဈမယျ။ ရနျကုနျ သို့ ရခိုငျ သို့ တခြို့မွို့တှပေျေါက သတျ မှတျထားတဲ့ နရောမှာ နထေိုငျရငျး ဖတျလိုကျရတာလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။ ရှာအပွငျက တဲကလေးမှာ ခွငျကိုကျခံရငျး တယောကျထဲ ဒု က်ခခံလို့ တရှာလုံးနဲ့ တယောကျ မလဲရစဖေို့ စှနျ့စားလိုကျတဲ့ လူငယျလေး လဲ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။ နရေထိုငျ ရတာ အဆငျမပွပေမေယျ့ အမြားအကြိုးအတှကျ အတ်တနဲ့ ပရကို ဖလှယျလိုကျသူလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။ အိမျမှာ သကျတောငျ့သကျသာ ထိုငျနရေငျးနဲ့ လူနာတှေ မြားလာပီဆိုပီး စိတျဓာတျ ကနြသေူလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။
အစားအသောကျအလြှံပယျနဲ့ ဘီယာလေး ငုံရငျး နောကျတလလောကျတော့ အိမျထဲ မှာပဲ အောငျးနမှေဖွဈမယျ ဆိုတဲ့ သူကွှယျကွီးလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။ အခနျးတခနျးမှာ လူဆယျခြီ စုနရေပီး အိမျမပွနျနိုငျတော့တဲ့အကွောငျး ငွီးတှားရငျး လကျကနျြငှလေေးနဲ့ အသကျ ဆကျဖို့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ အလုပျသမလေးတှလေဲ ဖွဈကောငျး ဖွဈမယျ။ ကြူးကြျော တဲလေးမှာ စုပွုံတိုးနရေတဲ့ မိသားစုတှကေို မကွောကျ ကွဖို့နဲ့ အားမငယျဖို့ အားပေးနတေဲ့ ရောဂါတှကွေား ဝမျးတထှာကို ရှာဖှရေတဲ့ တနလေု့ပျ တနစေ့ား အလုပျသမားလေးလဲ ဖွဈကောငျး ဖွဈမယျ။အခကျခဲဆုံးအခြိနျတှမှော တယောကျကို တယောကျ ဖေးမကွ မယျ။ အတူ တူ တိုကျပှဲဝငျကွမယျ။
အခြိနျတိုငျးမှာ ခေါငျးတှမေထေ့ားမယျ။ အားတငျးထားကွမယျ။ လူမြိုး ဘာသာ ဆငျးရဲ ခမျြးသာမရှေး ကုသပေးကွမယျ။ ခကျခဲတဲ့နတှေ့ေ အမှောငျဆုံးနာရီတှမှော အတူတကှ လြှောကျလှမျးကွမယျ။နောကျဆုံးတနေ့… ဒီရောဂါကွီး ပွီးသှားပီဆိုတဲ့တနမှေ့ာ…. အားလုံးနဲ့အတူ နသေ့ဈ တခုရဲ့ နရေောငျကို မိုးကောငျးကငျ တခုထဲအောကျမှာ အတူကွညျ့ကွမယျ။ ရုနျးကနျခဲ့ရမှုတှကေို သတိရရငျးနဲ့ပေါ့……မွနျမာပွညျ ကတော့ ကိုဗဈ ဒုတိယလှိုငျးကို ဖွတျသနျးနေ ရပီဖွဈပါတယျ။ မွငျ့မားလာတဲ့ လူနာအရအေတှကျ၊ ကနျ့သတျခကျြရှိတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျ ထမျးတှရေဲ့ အနအေထား၊ စကျပစ်စညျးတှနေဲ့ နရောထိုငျခငျး အစရှိတာတှကေိုလဲ ထိနျးပီး လုပျကိုငျနရေပါတယျ။
ရှတေ့နျးက လူတှလေဲ အလှနျပငျပနျးနကွေပါပီ။ ပွညျသူတှေ ထဲမှာလဲ ကွောကျလနျ့နသေူတှေ ရှိတယျ။ ဂရုမစိုကျသူတှလေဲ ရှိတယျ။ ဂရုစိုကျခငျြသျောလညျး ဝမျးရေးအရ အံကွိတျလုပျနရေသူတှလေဲရှိတယျ။ အမြားစု ရငျထဲမှာတော့ ပူပငျမှုတှေ အပွညျ့နဲ့ပါပဲ။ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပညာရေး အကုနျလုံးကို စိတျပူနကွေရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖွတျသနျးနေ ရဆဲပါပဲ။တမနကျ မိုးလငျးလာတယျ။ လူနာ ဘယျနှယောကျလဲ ကွညျ့ကွတယျ။ လနျ့ကွတယျ။ စိတျပူကွမယျ။ နောကျ ညရောကျလာတယျ။ လူနာစာရငျး ကွညျ့ကွတယျ။ လနျ့ကွတယျ။ စိတျဓာတျကကြုနျကွတယျ။ ဒီလိုနဲ့ နစှေဲ့တှေ တရကျပီး တရကျ ဖွတျသနျးလာခဲ့ကွတာ အခုဆို ၁လ နီးပါးရှိတော့မယျ။
၁ လ ဆိုတဲ့ အခြိနျက မသေးပါဘူး။ ပိုးကူးစကျမှုကလဲ နောကျ ၂ ပတျလောကျထိ လြှော့ကဖြို့ မရှိသေးဘူး။ မွငျ့နဦေးမှာပါပဲ။ ဒီအခြိနျမှာ အားတငျးထားကွဖို့ ပွောပမေယျ့ လူအမြားစုက စိတျဓာတျကနြကွေပါပီ။ မကကြွပါနဲ့ဦး။ ဒီတိုကျပှဲကို အနိုငျတိုကျကွ ရအောငျပါ။ တရကျ တရကျ နထှေကျလာတိုငျး တာဝနျကတြဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေ ရှတေ့နျးက ကုသနကွေတယျ။ အစိုးရဝနျထမျးတှလေဲ ရုံးတကျနေ ကွတုနျးပဲ။ အပွငျလုပျငနျးတှလေဲ ဆကျလကျလညျပတျနဆေဲ။ ပွညျသူတှလေဲ ဝမျးရေးအတှကျ ရုနျးကနျနရေဆဲပါ။ တရကျပီး တရကျ ကိုယျ့အလုပျ ကိုယျလုပျနကွေရငျး ကြျောဖွတျနကွေတာပါ။ ပိုထူးလာတာက ရောဂါကာကှယျဖို့ သတိထားနထေိုငျရတာလေး တခုပါပဲ။
စိတျဓာတျမကပြါနဲ့။ နသေ့ဈတိုငျးကို လူသားတိုငျး အတူတူ ကြျောဖွတျကွရတာပါ။ ကနြျောတို့လဲ ရငျဆိုငျမယျ။ ခငျဗြားတို့လဲ ရငျဆိုငျကွ ရတာပါပဲ။ အားလုံးဟာ အတူတကှပါပဲ။ ကုသရသူက ကုမယျ။ သံသယရှိသူက သတျမှတျနရောမှာ နရေမယျ။ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံရသူက ဆေးရုံမှာ နရေမယျ။ ကနျြသူတှကေ ကိုယျ့အလုပျကို ဆကျလုပျနကွေမယျ။ ပွနျကောငျးလာသူက တာဝနျတှေ ပွနျထမျးဆောငျမယျ။ နေ မကောငျးဖွဈလာသူက ဆေးရုံကို ပွနျလာမယျ။ ဒီလိုပဲ သံသရာလညျရငျးနဲ့ ကြျောဖွတျသှားကွရမှာပါ။ ဘာမှမလုပျရသေးခငျ ဘာမှကူး စကျမှု မခံရသေးခငျထဲက ကွိုတှေးပီး စိတျဓာတျ ကနြမေယျဆို လူဖွဈရှုံးပါတယျ။
အရာရာကို ကောငျးမှနျတဲ့ စိတျ၊ အရှုံးမပေးတဲ့ ဇှဲနဲ့ ကြျောဖွတျပါ။ ရောဂါရှိနသေူတှကေလဲ ငါပွနျကောငျးရမယျဆိုတဲ့စိတျဓာတျ၊ မရှိသေး သူကလဲ ငါ မကူးစကျအောငျ ကွိုးစားနမေယျဆိုတဲ့စိတျဓာတျနဲ့ ရဲရဲတောကျဖွတျသနျးကွပါ။ လှခှေကျ ခညျြးကနျြ အလံမလှဲပဲ တိုကျပှဲ ဝငျကွပါ။ အားလုံးဟာ ဒုတိယလှိုငျးကို အတူတကှ ဖွတျသနျးနကွေတာပါ။ တယောကျထဲ ရငျဆိုငျကြျောလှားနရေတာ မဟုတျပါဘူး။ စိတျမလြှော့လိုကျပါနဲ့။ မနကျဖွနျမြားစှာ ရှိပါသေးတယျ။ အားတငျးထားပါ။
ယနေ့ည အတွက် ဓာတ်ခွဲ အတည် ပြုလူနာ စုစု ပေါင်း (၇၇) ဦးတွေ့ ရှိ
ရန်ကုန်မြို့တွင် (Stay at Home) အစီအစဉ်ကို မြို့နယ် (၃) ခုထပ်တိုး၊ စုစုပေါင်း (၁၀) မြို့နယ်အထိ ရှိလာခဲ့
မက်ဆင်ဂျာ ကနေ ချိန်းတွေ့ရန် ခေါ် ကာ ဓား နဲ့ ထိုးသတ်သူ ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီး